မက်ဆီက တကယ်ပဲ ဘာစီလိုနာအသင်းက ထွက်သွားမှာလား…? – MySport Myanmar
မက်ဆီက တကယ်ပဲ ဘာစီလိုနာအသင်းက ထွက်သွားမှာလား…?
အခုတလော စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး ဘောလုံး မေးခွန်းက မက်ဆီအနေနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းကနေ ထွက်သွားတော့မလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲ ဖြစ်ပြီး မက်ဆီဟာ အသက် (၁၄) နှစ် အရွယ်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းကို ရောက်လာကတည်းက အသင်းမပြောင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းကို လာလီဂါ ဆုဖလား (၁၀) ကြိမ် နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဆုဖလား (၄) ကြိမ် ရရှိအောင် ကူညီနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ဆု၊ ဘလွန်းဒီအော်ဆုကို (၆) ကြိမ်နဲ့ ဘလွန်းဒီအော်ဆုကို အများဆုံး ရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Cadena SER သတင်းက အသက် (၃၃) နှစ်အရွယ် မက်ဆီဟာ လာမယ့် (၂၀၂၁) ခုနှစ်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ စာချုပ် ကုန်ဆုံးတော့မှာ ဖြစ်ပေမယ့် စာချုပ်သစ် ထပ်တိုးဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ဘဲ ဘာစီလိုနာအသင်းကနေ ထွက်သွားနိုင်တယ်လို့ စတင် ဖော်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ အသင်းရဲ့ အားကစား ဒါရိုက်တာ အဲရစ် အဘီဒယ်လ်နဲ့ အချင်းများခဲ့စဉ်က “အားကစားနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ သူတွေလည်း တာဝန်ယူမှု ရှိသင့်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ တာဝန်ယူသင့်တယ်”လို့ ဝေဖန်ခဲ့ဖူးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီဟာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ် ရောဂါကြောင့် အသင်းဖော်တွေနဲ့ အတူ လစာ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း အဖြတ်ခံခဲ့ရပြန်ပြီး လက်ရှိမှာကလည်း နည်းပြ ဆက်တီယန်ရဲ့ လက်အောက်မှာ ရလဒ်ဆိုးတွေ ရရှိလာတာကြောင့် အသင်းက ထွက်သွားနိုင်တယ်လို့ ထင်ကြေးရှိလာပါတယ်။ ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းကနေ ထွက်သွားမယ် ဆိုရင်တော့ အရင်က ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ နည်းပြ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးတဲ့ နည်းပြ ပက် ဂွါဒီယိုလာရဲ့ မန်စီးတီးအသင်းကို ပြောင်းသွားဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေ အရှိဆုံး ဖြစ်တယ်လို့လည်း ယူဆကြပါတယ်။ မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းကနေ ထွက်သွားတော့မယ်လို့ မီးစိမ်းပြလိုက်တယ် ဆိုတာနဲ့ ငွေသုံးနိုင်တဲ့ ဥရောပ အသင်းကြီးတွေက သူ့ကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် အပြိုင် ကြိုးစားမှာ ဖြစ်ပြီး Goal သတင်းကတော့ မက်ဆီအနေနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းကနေ မထွက်သွားလောက်ဘူးလို့ အဖြေ ပေးခဲ့ပါတယ်။
MySport Myanmar2020-07-09T21:55:09+06:30July 9th, 2020|Football, La Liga, News|